လောကဓံကြုံ မဖြုံတမ်းပေါ့ မတုန်စမ်းနဲ့ စိတ်ခိုင်စေ
လောကဓံတရား ဟူသည်မှာ လောကဓမ္မ ဟူသောပါဠိမှ ဆင်းသက်လာသော ပါဠိပျက် စကားလုံး၊(တနည်း) ပါဠိစကားလုံးကို မြန်မာမှုပြု မွေးစားထားသော ပါဠိသက်စကားလုံး (ပါဠိမှဆင်းသက်လာသော စကားလုံး) သာ ဖြစ်ပါသည်။ လောကဓမ္မ ကိုပင် လောကဓံဟု ခေါ်ဆိုကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လောကဓံဟုလည်းကောင်း၊ လောကဓမ်ဟုလည်းကောင်း သတ်ပုံနှစ်မျိုးရှိရာတွင်…
Added by ukkmaung on September 29, 2010 at 12:00pm — No Comments
Added by ukkmaung on September 28, 2010 at 5:30pm — No Comments
အရှင်သာရိပုတ္တရာ သို့မဟုတ် ပညာမိုးလောက်မြင့်မား၍ မြေကြီးလိုနှိမ်ချသူ
သူတော်ကောင်း နှလုံးသားတွေထဲမှာ အရှင်သာရိပုတ္တရာ မထေရ်ကဲ့သို့ နှလုံးသားကို ဖူးမြော်ကြည်ညိုရတာဟာ အားရကျေနပ်စရာ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်တာရာ တွေ စုံလင်တဲ့ညချမ်းမှာ ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကို
မော်ကြည့်မိတဲ့အခါ သောကြာကြယ်လို့ခေါ်တဲ့ သောက်ရှူးကြယ်ကြီးကို
ကြယ်တာရာတွေထဲမှာ ထူးခြားတောက်ပစွာ တွေ့မြင်ရသလို အရှင်သာရိပုတ္တရာလည်း
သူတော်ကောင်း အစားစားတွေထဲမှာ ကိုယ်ကျင့်တ၇ားအရရော စိတ်နေ… Continue
Added by ukkmaung on September 26, 2010 at 6:23pm — No Comments
နိဗ္ဗာန်၏ ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဂုဏ်ပုဒ်များ‏
၃။ ကာမဂုဏ် အာလယကို အကြွင်းမဲ့ခွာရာ နိဗ္ဗာန်။ (အာလယသမုဂ္ဃါဋော)
၄။ ၀ဋ်သုံးပါးမှ ကင်းပြတ်ရာ နိဗ္ဗာန်။ (၀ဋ္ဋုပစ္ဆေဒေါ)…
Added by ukkmaung on September 24, 2010 at 8:30pm — No Comments
Added by ukkmaung on September 23, 2010 at 10:30am — No Comments
The Sangha: "The Sangha of the Blessed One's disciples (…
Added by ukkmaung on September 22, 2010 at 8:30pm — No Comments
Added by ukkmaung on September 22, 2010 at 11:30am — No Comments
သီလပါရမီ (စိတ်ညစ်ရင် ရေချိုးပါ။)
တစ်ခါတုန်းက သားအဖ နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တော့ သားအဖ နှစ်ယောက် ခရီးတစ်ခု ထွက်ဖို့ ပြင်ကြပါတယ်။ သူတို့ထွက်မယ့် ခရီးစဉ်မှာတော့ အုပ်တစ်ခုကို ဖြတ်သန်း
သွားရမှာပါ။ အဲဒီ တောအုပ်ထဲမှာ ဓားပြ သူခိုးတွေကလည်း
ရှိနေပါတယ်။ဓားပြသူခိုးတွေရဲ့ လုပ်ထုံး အစဉ်အလာ တစ်ခုက သားအဖ နှစ်ယောက်
လာရင် သားကိုဖမ်းပြီး အဖေလုပ်သူကို အိမ်ပြန်ပြီး ငွေယူစေပါတယ်။ ဆရာတပည့်
Added by ukkmaung on September 22, 2010 at 10:53am — No Comments
လွယ်ကူလေ့လာ ပါဠိစာ (ပါဠိ စာလုံးဆင့် ဖတ်နည်း )
ပါဠိ စာလုံးဆင့် ဖတ်နည်း ရှင်းတမ်း
၅ ။ ဟထိုး ဝဆွဲ ၊ ရရစ် ယပင်း ၊…
Added by ukkmaung on September 20, 2010 at 11:00am — No Comments
အဂျန်တာ လိုဏ်ဂူတန်းကြီးများ - ၂
လိုဏ်ဂူ ၆ မှာ အဂျန်တာတွင် တစ်ခုတည်းသော နှစ်ထပ်လိုဏ်ဂူ ဖြစ်သည်။ လိုဏ်ဂူအောက်ထပ်ရှိ ရုပ်ကြွများမှာ ပျက်စီးယိုယွင်း နေကြလေပြီ။
ထိုအောက်ထပ် တောင်နံရံလိုဏ်ဂူ အတွင်းတွင် အာသနမုဒြာဟန် သပ္ပါယ် သော
ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် တစ်ခုရှိသည်။ အထက်ထပ်မှာ ကျယ်ပြန့်သော ခန်းမဆောင်ကြီး
တစ်ခုဖြစ်သည်။ မျက်နှာကျက်နှင့် နံရံအားလုံး ဗုဒ္ဓ၀င်ပန်းချီတို့ဖြင့်
လိုဏ်ဂူ ၇ မှာ စံပြပုံစံ တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားသော လှိုဏ်ဂူဖြစ်သည်။ အတွင်းတွင်…
Added by ukkmaung on September 20, 2010 at 9:30am — No Comments
God did NOT create the Universe, says Stephen Hawking ကမ္ဘာကြီးကို ထာဝရဘုရားသခင် ဖန်ဆင်းခဲ့ တာမဟုတ်ဟု စတီဖင်ဟော့ ကင်းပြောဆို
ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်၊ ပါမောက္ခ စတီဖင်ဟော့ ကင်း ကတော့ရူပဗေဒဆိုင်ရာသီအိုရီ
တွေကသာ ကမ္ဘာကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုရှင်းပြနိုင်ပါတယ်...ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပဲ....…
Added by ukkmaung on September 17, 2010 at 9:30am — No Comments
ဗုဒ္ဓပွင့်ပေါ်ခဲ့တာက(BC 623)ဆိုတော့၊ ဗုဒ္ဓက ခရစ်တော်ထက် ၆၂၃ နှစ် ပိုစောခဲ့သလို၊ မိုဟာမက်ပေါ်ခဲ့တာက(AD 570)ဆိုတော့
ဗုဒ္ဓကမိုဟာမက်ထက်လဲနှစ်ပေါင်း (၁၁၉၃)နှစ် ပိုစောခဲ့တော့ ၊ ယခု တရုတ်ပြည်မှာ ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ.စွယ်တော်(သွား)ရဲ. သက်တမ်းဟာ နှစ်ပေါင်း(၂၆၃၃)နှစ်ရှိနေပါပြီ။အဲဒီလောက်သက်တမ်းရှိပြီဖြစ်တဲ့ သွားအပေါ်မှာ သံသယမကင်းဖြစ်နေတဲ့ အနောက်တိုင်း သိပ္ပံပညာရှင်တို.ကအဲဒီသွားကို Genetic
Engineering နည်းနဲ. စမ်းသပ်… Continue
ဘုရားဂုဏ်တော် ကိုးပါး The Nine Attributes of the Buddha 佛的九個屬性
ဣတိပိ သော ဘဂ၀ါ -
အရဟံ ဂုဏ်တော် = အပူဇော်ခံထိုက်သော ဂုဏ်တော်၊
Araham : Being absolutely unblemished by defilements (kilesas), he is of
the purest morality.
Added by ukkmaung on September 16, 2010 at 10:00am — No Comments
Added by ukkmaung on September 15, 2010 at 8:00pm — No Comments
(10)ပါး သီလ 十戒 Ten Precepts dasa-sila
၁။ ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
သူတစ်ပါး၏အသက်ကို သတ်ဖြတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
၂။ အဒိန္န္န္နာဒါနာ ဝေရမဏိ သိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ
သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏။
2. Adinnadana veramani sikkhapadam… Continue
Added by ukkmaung on September 15, 2010 at 12:00pm — No Comments
(ဂ)ပါး သီလ 八戒 The Eight Precepts attha-sila
Added by ukkmaung on September 15, 2010 at 10:00am — No Comments
အဂျန်တာဟု ဆိုလိုက်လျှင် ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ပန်းချီ၊ ပန်းပု အနုပညာ ၀ါသနာပါသူတိုင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး သိရှိထားကြပြီး ဖြစ်သည်။
အိန္ဒိယပြည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်တို့
အိန္ဒိယပြည် ကို စိတ်ဝင်စားအောင် ဆွဲဆောင်လှုံ့ဆော်သော စကားတစ်ခု ရှိသည်။
ထိုစကားမှာ "Incredible India" မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ထူးဆန်းထွေလာ
အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသော အိန္ဒိယဟု အမြဲတမ်း ကြွေးကြော်လေ့ရှိပါသည်။… Continue
Added by ukkmaung on September 14, 2010 at 9:30am — No Comments
ဖခင်တစ်ယောက်သည် သူ့ကားကို ပေါလစ်တိုက်နေစဉ် (၄)နှစ်အရွယ် သူ့သားငယ်က ကျောက်ခဲလေးတစ်လုံးနှင့် ကားဘေးတစ်ဖက်မှာ ခြစ်နေသည်။ ဖခင်က စိတ်ဆိုးစွာဖြင့် သားလက်ကိုဆွဲ၍ ရိုက်ခဲ့သည်။ ဒေါသထွကနေ၍ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဘယ်လောက်တောင် ရိုက်လိုက်မိမှန်းမသိ။ သားငယ်၏လက်ကလေး ကျေမွသွား၍ ဆေးရုံသို့ ပို့လိုက်ရသည်။
နောင်တမျက်ရည်များဖြင့် ပြည့်နေသော ဖခင်၏မျက်နှာကိုကြည့်ကာ သားလေးက မေးရှာသည်။ "ဖေဖေ သားလက်ကလေးတွေ ဘယ်တော့ ပြန်ကောင်းလာမလဲ ဟင်? " ပြန်လည်ဖြေကြားရန်… Continue
Added by ukkmaung on September 13, 2010 at 4:44pm — No Comments
သရဏဂုံ (၃)ပါး နှင့် (၅)ပါး သီလ 三皈依及五戒巴利语念诵
သရဏဂုံ(၃)ပါးနှင့် (၅)ပါးသီလ 三皈依五戒（巴利语、汉语）
Namo tassa Bhagavato arahato sammasambuddhassa.…
Added by ukkmaung on September 12, 2010 at 5:00pm — No Comments
1 ? bk&m;ypPnf;…
Added by ukkmaung on September 12, 2010 at 11:30am — No Comments